Emi odude ke Tanzhou Town, Zhongshan City, Zhongshan Tauras Technologies Co., Ltd (mbụ ya bụ Zhuhai Nanyuxing Electronic Co., Ltd) e hiwere na November 1998 na tumadi ọkachamara na-amị ma na-ere electronic mgbanwe nke neon ọkụ.
Hergbaso nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "na-eche na ọ bụ iji nweta uru ndị ahịa", Zhongshan Tauras nwetara ezigbo aha na ụlọ ọrụ ahụ ma bụrụ ndị ndị ahịa ghọtara otu olu. Site na 1998 rue 2001, Zhongshan Tauras malitere na ngwa ngwa. Site na 2001, enweela ndị ọrụ 100 na ụlọ ọrụ anyị, nke tọrọ ntọala siri ike maka mmepe ọzọ.
Na Jenụwarị, n'ihi mkpa mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, a kpaliri ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Cuizhu Industrial Mpaghara, Qianshan, Zhuhai. Waslọ ọrụ mmepụta ihe gbasaa ruo mita 600, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ were karịa 200.
Na 2003, osisi ahụ toro site na mita 1650, wee bido usoro mmepụta ahaziri ahazi, na-ebute ịrị elu ngwa ngwa nke ikike mmepụta. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ji nke nta nke nta melite nhazi nhazi, na-ahazi usoro njikwa, nke mere na ọ gbanwere site na ogbako ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu.
Na 2004, ụlọ ọrụ ahụ nwetara nnukwu ihe ọhụụ maka ngwaahịa R&D ya na-arụ ọrụ 'ebe mbụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ike ịchekwa ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ mmiri mepụtara n'adabereghị n'ụlọ.
Ka ọ dị ugbu a, site na iji nlezianya na-ahụ maka nghọta ahịa, ụlọ ọrụ ahụ mere mgbanwe nhazi na usoro ngwaahịa ya; ebe etinyere Ikanam ike onunu ngwaahịa na-etinye n'ime akpa ebe; N'otu aka ahụ a na-agbasapụkwa ọwa ahịa ahụ n'ahịa mba ụwa.
N’ọnwa Eprel, akpọrọ ụlọ ọrụ ahụ ka ọ sonyere na China Association of Lighting Industry na ebe ahụ ghọrọ onye otu China Association of Lighting Industry.
Na April, ụlọ ọrụ e ọdịda nke aha “isi enterprise na-aga n'ihu ruru eru àgwà na a pụrụ ịtụkwasị obi ika” mgbe ya electronic transformer usoro ngwaahịa maka neon ìhè na-ọma na-achịkwa na-enyocha site na steeti.
Na Jenụwarị, ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ nke ọkụ nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gafere asambodo UL ma nye ha asambodo UL.
Na Machị, ihe ndị na-agba ọkụ ọkụ gbanyere mmiri n'ọkụ wee gbafere ọkụ eletrik CE na asambodo nchekwa CE oge niile ma nye ya asambodo kwekọrọ.
Na Mee, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ nke mmiri mmiri nke ụlọ ọrụ mere nke enyere ụlọ ọrụ ikike ikikere.
Na 2005, Ikanam mmiri-àmà mgba ọkụ ike usoro usoro ngwaahịa nyochara na-emepụta site na ụlọ ọrụ malitere na-emepụta na a buru ibu, na ahịa choro na-ụba nọgidere; iji mejuo ọchịchọ ahịa na-arịwanye elu, ụlọ ọrụ ahụ mụbara ụlọ ọrụ mmepụta ihe ya na 1,650m2 wee malite iji akara mmepụta ọhụrụ; nke mere ka ụlọ ọrụ ahụ mee ka ikike ike ya nke ọkụ ọkụ nke ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ.
Na Mee, ụlọ ọrụ ahụ gafere asambodo njikwa njikwa ISO9001 ma nye ya asambodo; usoro a haziri ahazi na sistemụ arụmọrụ jikọtara ntọala siri ike maka mmepe ọ ọsọ ọsọ.
Na July, ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ mmiri mmiri ọkụ gbanwere akwụkwọ ikike RoHs (asambodo gburugburu ebe obibi EU) ma nye ha asambodo kwekọrọ.
Na Septemba, e nyere onye ntụgharị elektrọnik nke neon light aha nke "Top-quality neon light ngwaahịa nke China" nke Kọmitii Neon Lamp nke Association Advertising China.
Na Jenụwarị, a kpọrọ ụlọ ọrụ ahụ ka ha sonye na Kọmitii Neon Lamp nke China Advertising Association wee ghọọ onye otu so na Kọmitii Mgbasa Ozi Neon nke Adtù Mgbasa Ozi China.
Na July, ihe ngosi ọkụ ọkụ ọkụ mmiri nke ọkụ ọkụ gbanwere akwụkwọ EMC (Asambodo ndọtị electromagnetic nke European) ma nye ha asambodo kwekọrọ.
Na Nọvemba, ihe ngosi ọkụ ọkụ ọkụ mmiri mmiri ọkụ gbanwere FCC asambodo (Asambodo ikike electromagnetic America) ma nye ha asambodo kwekọrọ.
Na Nọmba Nọvemba, ihe ngosi ike ọkụ ọkụ ọkụ mmiri ọkụ wefere IP66 & IP67 asambodo (asambodo mmiri mmiri European) ma nye ha asambodo kwekọrọ.
Afọ 2009 bụ mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ. Iji lekwasị anya n'ịkwalite ụdị ụlọ ọrụ ahụ, aha ụlọ ọrụ ahụ dị ka "Zhuhai Tauras Technologies Co., Ltd"; nke emere ya ka ya na akara ahia edenyere aha ya iji kwado njirimara ahia.
Na March, ngụkọta ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ 10,000m2 na ọtụtụ nke elu-ọgwụgwụ R&D na management pesonel ka ẹkenam nọgidere.
Na Mee, ihe ngosi ọkụ ọkụ ọkụ mmiri mmiri ọkụ gbanwere asambodo KC (asambodo nchekwa Korea) ma nyekwa ya asambodo kwekọrọ.
N'August, ihe ndị na-agba ọkụ ọkụ mmiri nke ọkụ ọkụ gbanwere asambodo MM (asambodo ọnọdụ nchekwa ọnọdụ German) ma nye ha asambodo kwekọrọ.
Na Septemba, ihe nrịba ama nke ọkụ ọkụ mmiri nke ikanam na-agafe asambodo IP68 (asambodo mmiri mmiri European) ma nye ha asambodo kwekọrọ.
Na July, na ikanam mmiri-àmà mgba ọkụ ike usoro usoro ngwaahịa a ghọtara dị ka "a maara nke ọma na ika-aha ngwaahịa nke Guangdong Province" site CHC Guangdong Kọmitii.
N'otu afọ ahụ, ọnụ ahịa ire ahịa mebiri site na Yuan narị nde; ụlọ ọrụ ahụ abanye na ọkwa ọhụụ ọhụrụ.
Na 2011 rue 2014
Na Jenụwarị 2011, a kpọrọ Zhuhai Tauras ka ọ sonyere na Kọmitii Neon Oriọna nke Adtù Mgbasa Ozi China ma ghọọ onye otu so na Kọmitii Mgbasa Ozi Neon nke Associationtù Mgbasa Ozi China.
Na February 2011, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ nke mmiri ọkụ gbanwere SAA asambodo SAA (asambodo nchekwa nke Australia) ma nye ha asambodo kwekọrọ.
Na July 2011, na ikanam mmiri-àmà mgba ọkụ ike usoro usoro ngwaahịa a ghọtara dị ka "a maara nke ọma na ika-aha ngwaahịa nke Guangdong Province" site CHC Guangdong Kọmitii ọzọ.
Na Jenụwarị 2012, Tauras ghọrọ onye otu so na LIGHT SOURCES & SIGN ADVERTISING COMMITTEE OF CHINA ADVERTISING ASSOCIATION.
Na Jun 2012, ụlọ ọrụ nwetara mba Practical Patent akwụkwọ maka 6 ụdị nke ike ọkọnọ.
Na Augus 2012t, Ikanam waterproof mgba ọkụ ike usoro usoro ngwaahịa ghọtara dị ka "a maara nke ọma na ika-aha ngwaahịa nke Guangdong Province" site CHC Guangdong Kọmitii ọzọ.
Na June 2013, Tauras nwetara asambodo ikike nke ikike ịgbanye ọkụ n'ime ụlọ.
Tauras zụrụ ala na obodo Zhongshan, nke nwere square mita 15,000. E wuru Tauras Industrial Park. Factorylọ ọrụ ahụ wee kwaga na saịtị ọhụrụ a na Tanzhou Town, Zhongshan City, naanị nkeji 5 na-aga Zhuhai na ihe na-erughị elekere elekere 1 n'otu n'otu na Shenzhen, Guangzhou, Macau na Hongkong.
Iji nọgide na-arụ ọrụ na saịtị ụlọ ọrụ anyị, a gbanwere aha Tauras dị ka "Zhongshan Tauras Technologies Co., Ltd", iji kwado azụmahịa na nkwalite anyị na mba ndị ọzọ.
Na 2017, iru nnukwu ihe ọzọ, Tauras kwadoro Coke Cola ma nye ha ike ọrụ igwe ọrụ ha.
Iji meziwanye ikike imepụta ihe, Tauras nakweere igwe ọzọ ma mepụta ngwa ngwa akpaaka. Key akụrụngwa dị ka PCB efegharị soldering igwe, SMT reflow soldering igwe, akpaaka-ule ngwaọrụ, ultrasound ọcha igwe, Pu akpaaka-ejuputa igwe, zuru ezu ikike nke akpaaka-merela agadi usoro.
Tauras malitere usoro zuru oke nke ndị ọkwọ ụgbọ ala maka ọkụ friji, nke kpuchiri ihe niile ngwa ngwa nke ndị na-azụ ahịa azụmaahịa, friza, ndị na-ajụ oyi, ndị ahịa, nri na ihe ọ beụverageụ na ahịa. Tauras ghọrọ ọkachamara nke ndị ọkwọ ụgbọ ala ejiri mee ihe na ngwa nju oyi nke azụmahịa yana mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ, ọkachasị na Europe, Southern America na Northern America.